Soo-saareyaasha Kaararka PCV - Shirkadaha Shiinaha PCV Kaararka & Warshad
Kaar aan caadi ahayn
Maskaxdu waxay leedahay in kabadan 500 oo wasakh oo kaladuwan (oo leh qaab / cabbir kaladuwan) oo loogu talagalay kaarka aan caadiga ahayn ee PVC sidoo kalena waxaan sameyn karnaa cabir kasta oo qaas ah, dhumuc iyo qaab sida ku cad sawirka macaamiisha
Kaadhka hadiyaddu waa nooc ka mid ah kaararka casriga ah. Waxay ka kooban tahay antenna chip iyo induction. Anteenada cufan iyo induction waxaa lagu soo buuxiyay kaar. Kaarka wuxuu ka sameysan yahay PVC caadiga ah, ABS, xayawaan guri iyo waxyaabo kale, oo aan lahayn qeyb banaanka u ah.
Kaarka Aqoonsiga Mind ee loo habeeyay ayaa laga sameeyay 100% nooc cusub oo PVC ah wuxuuna raacayaa heerka caalamiga ah ee ISO 7816.
Kaadhka daabacaadda ee Inkjet
Kaararka PVC ee 'MIND Inkjet PVC' waxay leeyihiin dahaadh nano gaar ah oo dusha sare ah, way iska indho tiri kartaa khadadka. Sidaa darteed, waxay ku daabacan kartaa daabacadaha inkjet sida Epson, Canon printer.Waa kharashka keydinta daabacadda kharashka iyo macaamilku uma baahna inuu iibsado kaarka Aqoonsiga qiimaha sare si gooni gooni ah.
Kaarka Dareenka Maskaxda, kaarka xubinnimada, kaarka VIP waxaa badanaa laga sameeyaa 100% nooc cusub oo PVC ah wuxuuna raacayaa heerka caalamiga ah ee ISO 7816. Barcode, QR code, magnetic stripe, daabacaadda amniga waa la habeyn karaa waxaanan bixinnaa fursado badan oo shakhsi ahaaneed.
Kaarka xariijimaha birlabta
Kaarka Mind Magnetic stripe wuxuu raacayaa heerka caalamiga ah ee ISO 7816. Xariiqdu waxay ka kooban tahay saddex waddo ama 2 raad, waxay noqon kartaa midabbo madow / cawl / dahab / qalin. Waxaa lagu duubi karaa xarfaha xarfaha.